Fedora Silverblue: Rafitra miasa amin'ny Desktop tsy azo ovaina | Avy amin'ny Linux
Fedora Silverblue: rafitra fiasa Desktop tsy azo ovaina mahaliana
Linux Post Install | 23/09/2021 06:00 | Nohavaozina amin'ny 23/09/2021 12:17 | Fitsinjarana, GNU / Linux
Tahaka ny nampanantenaintsika fotoana vitsy lasa izay, ao amin'ny lahatsoratray «Tetikasa Fedora: fahalalana ny fiarahamonina misy anao sy ny fivoarany ankehitriny«Androany no hitrandrahana ny iray amin'ireo tetik'asa na fivoarany, antsoina "Fedora Bluesilver".
"Fedora Bluesilver" mitady ho a Rafitra miasa tsy azo ovaina (tsy miova) ho an'ny solosaina izay tsy maintsy toeram-piasana ao amin'ny GNU / Linux ary tokony hampiasain'ny matihanina, indrindra ny mpamorona sy ny hafa mifandraika amin'ny Siansa informatika, noho ny fanohanany mandroso momba ny fampiasana ny fitoeran.
Tetikasa Fedora: fahalalana ny fiarahamonina misy anao sy ny fivoarany ankehitriny
Ho an'ireo liana amin'ny fizahana fahasambarana Lahatsoratra mifandraika teo aloha amin'ny ny Tetikasa Fedora sy ireo zavatra noforoniny isan-karazany, azonao atao ny manindry ity rohy manaraka ity, rehefa avy namaky ity famoahana ity izao:
“Ny Tetikasa Fedora dia ianaoSehatra loharanom-baovao vaovao, maimaimpoana ary malalaka ho an'ny fitaovana, rahona ary kaontenera ahafahan'ny mpamorona lozisialy sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina hanangana vahaolana manokana ho an'ireo mpampiasa azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia vondron'olona miara-miasa amin'ny fananganana sehatra rindrambaiko malalaka sy malalaka ary hiara-hiasa sy hizara vahaolana mifototra amin'ny mpampiasa naorina eo amin'io sehatra io. " Tetikasa Fedora: fahalalana ny fiarahamonina misy anao sy ny fivoarany ankehitriny
1 Fedora Silverblue: Mety tsara amin'ny fizotran'asa mifantoka amin'ny kaontenera
1.1 Inona ny Fedora Silverblue?
1.3 Fankasitrahana manokana
Fedora Silverblue: Mety tsara amin'ny fizotran'asa mifantoka amin'ny kaontenera
Inona ny Fedora Silverblue?
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha momba ny "Tetikasa Fedora", ambaranay fohifohy izany "Fedora Bluesilver" es:
"Rafitra miasa amin'ny birao tsy miova (tsy azo ovaina) natao hanomezana fanohanana tsara ny fizotran'entana mifototra amin'ny fitoeram-bokatra. Ity variana amin'ny Fedora Workstation ity dia mikendry ireo vondrom-piarahamonina mpamorona."
Na eo aza izany toetra tsy mety miova, tokony homarihina fa tena izy:
"Variant an'ny Fedora Workstation. Ary noho izany dia toa, mahatsapa ary mitondra tena toy ny rafitra fikirakirana birao mahazatra izy io, ary ny traikefa dia mitovy amin'ilay hita tamin'ny fampiasana ny toeram-piasana Fedora mahazatra."
Ary manazava izany, rehefa miresaka ny tsy fiovan'ny "Fedora Bluesilver" resahina amin'ny:
"Ny fametrahana ny Fedora Silverblue tsirairay dia mitovy amin'ny fametrahana hafa mitovy amin'ilay kinova. Ny Operating System izay eo amin'ny kapila dia mitovy tanteraka amin'ny masinina iray mankany amin'ny iray hafa, ary tsy miova mihitsy izany raha ampiasaina."
Anisan'ireo toetra mampiavaka azy ity afaka manonona ireto manaraka ireto isika:
Volavola tsy azo ovaina mba hisian'ny fitoniana bebe kokoa, tsy dia atahorana loatra ny lesoka. Ary noho izany dia mora kokoa ny mizaha toetra sy mivelatra.
Sehatra tena tsara ho an'ny fampiharana containerized, ary koa ny fampandrosoana rindrambaiko mifototra amin'ny container.
Ny rindranasao (ny app) sy ny kaonteneranao dia voatazona tsy ho voatanisa amin'ny rafitra fampiantranoana, manatsara ny fitoniana sy ny fahamendrehana.
Haingana ny fanavaozana ataon'izy ireo ary tsy misy fiandrasana azy ireo hametraka. Ny famerenana amin'ny laoniny ara-dalàna dia ampy mba hankafizanao ny kinova misy manaraka na hiverenanao amin'ny kinova taloha, raha ilaina izany.
Raha mila fanazavana fanampiny momba "Fedora Bluesilver" afaka mitsidika ny fizarana fampidinana momba ny "Tetikasa Fedora". Ary momba ny azy fizarana lehibe ofisialy Amin'ny manaraka rohy. Aiza no misy be misy antontan-taratasy indrindra ho an'ny fametrahana sy ny fampiasana. Ary momba ny fampahalalana ara-teknika ahatongavany amin'ny teknolojia tsy miova sy azo ampiasaina Toolbox izay itantanany ny fampiasana kaontenera, hahafahana mahazo fahatakarana manerantany sy lalina an'io fampandrosoana io.
Azo antoka, "Fedora Bluesilver" dia famoronana lehibe ho an'ireo mpampiasa mila tsy tapaka mamorona / mametraka / manova / manandrana fampiharana sy rafitra amin'ny Rafitra miasa anao. Hatramin'izay, mahavita manao fihetsika toy izany matetika tsy misy tahotra na ahiahy manova na manimba ny rafitra miasa ampiasaina, tena izy io a miampy sarobidy raha resaka asa na asa lehibe no resahina.
Y "Fedora Bluesilver" mahatonga ahy hieritreritra be, momba Mamaly (Sarin-tsary mivantana sy azo ampidirina) noforonina niaraka tamin'ny Distros GNU / Linux hafa toa MX o AntiX.
MX Snapshot: Ahoana ny fomba hamoronana MX Linux Respin manokana?
Satria, farafaharatsiny amin'ny resaka fametrahana, ny valin'ny fametrahana Respin dia mitovy foana. Izany hoe, dika mitovy amin'ny rafitra noforonina. Ary na dia tsy miova aza izy ireo dia avelany hametraka haingana avy amin'ny ISO noforonina araka ny sary sy ny endrik'ilay Rafitra fiasanay. Mamela ny hanana izany na hamerina azy io araka ny tiantsika hampiasa azy io hatrany.
Raha tsorina "Fedora Bluesilver" dia iray amin'ireo zavaboary mahaliana indrindra an'ny "Tetikasa Fedora". Hatramin'izay, mitady ho faran'izay mafy izy io marin-toerana sy azo itokisana como el Rafitra miasa, indrindra ho an'ireo matihanina ireo mpandraharaha, ary ho an'ireo izay mampiasa ny alehan'asa no nifantohana fitoeran.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fedora Silverblue: rafitra fiasa Desktop tsy azo ovaina mahaliana
hace Herinandro 4
Lahatsoratra tena tsara
Mpampiasa Silverblue aho ary tena tsy mitovy amin'ny fampiasana distro mahazatra izany. Miovaova tanteraka ny fomba fitantanana azy ary heveriko fa ny Silverblue ny ho avin'ny linux distros;
Misaotra amin'ity lahatsoratra ity nanazava tsara
Miarahaba anao, Paul. Misaotra anao noho ny hevitrao ary faly aho fa tianao izany. Tsy azoko natao ny niasa tamina MV, mba hitsapana azy bebe kokoa. Ataoko fa tsy mandeha amin'ny MV izany, sa tsy izany?
Salama, tsy mbola nametraka azy tao amin'ny MV mihitsy aho. Manana pc maromaro aho ary amin'ny iray manana volafotsy volafotsy….
Na dia efa namaky momba ny olana amin'ny milina virtoaly aza aho dia tsy fantatro raha te hanao virtualize azy ao anaty Boxes ianao, fa eto amin'ny YouTuBe dia misy olona mametraka plastika ary mampandeha azy, tsy fantatro raha te hijery ianao ary jereo raha mety aminao izany: https://www.youtube.com/watch?v=AeNKlIizUFc
Fiarahabana avy any Kolombia
Miarahaba anao, Paul. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara. Andramo indray miaraka amin'ny VirtualBox manaraka ny torolàlana ao amin'ny horonan-tsary fa tsy misy. Avy eo aho manandrana Boxes.
Ubuntu Touch OTA-19 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony